के तपाई एचआईभी (HIV) पोजीटिभ हुनुहुन्छ ? यी ६ लक्षणबाट जान्नुहोस् – Etajakhabar
के तपाई एचआईभी (HIV) पोजीटिभ हुनुहुन्छ ? यी ६ लक्षणबाट जान्नुहोस्
एचआईभी पोजीटिभ अर्थात् एड्स एक गम्भीर एवम खतरनाक रोग हो । यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर तपाई कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाई एचआईभी पोजीटिभ हो वा होइन । यस बारेमा जानकरी हुन अत्यन्तै अवश्यक छ किनकि सहि समयमा यसबाट बँच्न सकिन्छ र जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क गर्दा तपाई यस गम्भीर समस्याको चपेटमा आउन सक्नुहुन्छ । तपाईले अनुमान नै लगाउन सक्नुहुन्न कि तपाईको शरीरमा देखिन यी ६ लक्षण एड्स हुनसक्छ ।
के तपाईलाई लगातार ज्वरो आउँछ ? तपाई यस विषयमा सावधान हुनुपर्दछ किनभने लगातार आउने ज्वरो एड्सको एक लक्षण हुनसक्छ । यस रोगमा इम्यून पावर कम हुन्छ जसको कारण तपाईको प्रतिरोधक क्षमताले पटक-पटक ज्वरोलाई रोक्न सक्दैन ।
२- लगातार थकान
लगातार थकान बनिरहनु पनि एड्सको एक लक्षण हुनसक्छ । शरीरको इम्यून पावर कम हुनुको कारणले उसलाई आरामको अधिक आवश्यकता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा थकान लगातार बनिरहनु स्वाभाविक कुरा हो ।
३- छाती दुख्ने र घाँटी खराब हुने
छातीमा दुखाई रहनु र घाँटी खराब हुनु पनि यस गम्भीर रोगको एक लक्षण हुनसक्छ । यस स्थितिमा कयौँ पटक छातीमा तीव्र दुखाई पनि हुनसक्छ जुन दिनभरी र रातभरी जारी रहन सक्छ ।
४- त्वचामा निशान
इम्यून र रेसिटेन्स पावर कम हुनुको कारण शरीरले रोगहरूबाट बचाउन सक्षम हुन सक्दैन । यसको असर त्वचाको बाहिरी सतहमा पनि हुन्छ । त्वचामा रातो रेशेस हुनु र यो निको हुन् नसक्नु पनि यसको लक्षण हो ।
५- वजन लगातार घट्नु
एड्सको अन्य सम्भावित लक्षणहरूको साथ-साथै यदी तपाईको वजन लगातार घट्दै गईरहेको छ भने यो चिन्ताजनक कुरा हो । हुनत: वजन कम हुने अरू पनि कारण हुनसक्छ तर यसलाई वेवास्ता गर्न सकिदैन ।
६- सुत्दा पसिना आउनु
यदी तपाईले आरामको निन्द्रा लिन सक्नु भएको छैन र कुनै पनि तापक्रममा तपाईलाई अत्यधिक पसिना आउँछ भने यसलाई वेवास्ता गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा धेरै पसिना आउनुको साथै तपाई छट्पटाउदै रात बिताउनु हुन्छ वा श्वास बन्द भएर उकुसमुकुस महसूस गर्नुहुन्छ भने यो रोगको कारण पनि हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: १२:३५:५७